Coming Soon…… – PVTV Myanmar
· 10 months ago ·41 Comments
Like – 22K Share – 1419
Tay Za Zeya says:
We’ll be waiting…. 💖
Yoke Thay says:
2021-04-15 at 9:31 AM
ကျွန်တော်တို့မှာ အသံပဲ ရှိတယ် 🥺
Khine Zin Maw says:
Thank you for your efforts. Congratulations CRPH.❣️
Sun Min Aung Aung says:
2021-04-15 at 10:06 AM
Voice is not only thing we have, we have us.
ကြိုဆိုပါတယ် ရှင် ပြည်သူ အစိုးရ CRPH
2021-04-15 at 10:40 AM
CRPH အခက်အခဲက ဘာလဲ
▪️ CPRH နဲ့ အမေရိကန် ၊ ဗြိတိန် ၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ ၊ ဩစတြေးလျ နိုင်ငံက G to G ဆက်ဆံရေး တရားဝင် ရှိဖို့ လိုတယ်။
(အခု မရှိသေး ။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး နဲ့ ဒေါ်ဇင်မာအောင် စကားပြောပြီ ဆို လက်ခမောင်း ခတ်လိုက်တော့)
▪️ CRPH က ကုလသမဂ္ဂ နဲ့ နိုင်ငံတကာ အရေးယူမှု ဂိတ်ဆုံးတဲ့ အထိ စောင့်နေတာ။ ဂိတ် ဆုံးမှ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို ကြေညာမယ်
( ဒီအချိန် ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ကြေညာရင်၊ မအလကလည်း
ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့ ကြေညာမယ်။ အဲဒီအခါ G to G မရှိသေးရင် CRPH ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ဆွဲချသွားမယ်။ တရားဝင် အစိုးရအဖြစ် နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုမှ တရားဝင် စစ်တပ် ဖြစ်မယ်။ မဟုတ်ရင် အကြမ်းဖက်သမား ဖြစ်သွားမယ် )
▪️CRPH က သိသာစေ မမြင်စေနဲ့ ပုံစံနဲ့ စစ်ရေး လေ့ကျင့်နေတယ်။
( စစ်တပ်တတပ် ထူထောင်ဖို့က အနည်းဆုံး ၆ လ လိုတယ်။ တိုက်ရည်ခိုက်ရေး အရည်အသွေး မပြည့်ဝရင် လူရော လက်နက်ရော ဆုံးရှုံးမယ်။ )
▪️ CRPH က ဖက်ဒရယ် တပ်မတော် အစား ကာကွယ်ရေး လုံခြုံရေး အစီအမံလို စကားကို တမင်သုံးစွဲ နေတာ ဖြစ်တယ်။ ဖွင့်ထားတဲ့ စကားလုံး အပိတ်စကားလုံး မဟုတ်ဘူး။ လက်ဆုပ်ကိုင်ပြီး စွပ်စွဲလို့ မရအောင် လူးသာလွန့်သာ ရေးထားတာပါ။ လိုအပ်တာ စကားလုံး မဟုတ်။ လက်တွေ့ ပြည်နယ်သိမ်း ထိုးစစ်ပါ။
( တိုင်းရင်းသားတပ်တွေဟာ ဆုံးဖြတ်ချက် မရေရာသေးဘူး။ ဘယ်အဖွဲ့က နေပြည်တော်အထိ ချီတက်မယ်။ ဘယ်အဖွဲ့က ကိုယ့်ပြည်နယ် ကိုယ် ပြန်ရရေးပဲ လုပ်မယ်၊ ဘယ်အဖွဲ့က မအလ နဲ့ ခွထိုင်ပြီး လက်ရှိ နေရာမှာပဲ ကူညီနိုင်တာ ကူညီမယ် ဆိုတာ မရေရာသေးဘူး။ မရေရာပဲ ဘာကို စာရွက်ပေါ် ချရေးလို့ ရမှာလဲ။ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ပြည်နယ် ကိုယ်တိုက်ယူမယ် ဆိုတဲ့ ပြတ်သားချက်ရှိရင် CRPH ကို စောင့်နေစရာမလိုဘူး ။ မအလ တပ်ပျက်နေတုံး ထိုးစစ်ဆင်နေပြီ)
▪️ CRPH ဟာ ဖက်ဒရယ် အခြေခံဥပဒေအစား ကြားကာလ ဖက်ဒရယ် အုပ်ချုပ်ရေး အစိုးရကို သွားတယ်။ ဖက်ဒရယ် အခြေခံဥပဒေ ပေါ်ပေါက်ဖို့ မှာ အ​ရေးကြီးဆုံးက ဖက်ဒရယ် ပြည်နယ် ကြေညာဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်။
( ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်ဟာ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ် အသစ်တွေ ပြဒါန်းရမယ်။ ရခိုင်ဆိုရင် ဖက်ဒရယ်ထဲ ပါချင်မှ ပါမယ်။ ကွန်ဖက်ဒရိတ်တောင်းနေတယ်။ ရခိုင်နိုင်ငံတော် ဖြစ်ချင်နေတယ်။ ဘယ်လို ထည့်ရေးရမလဲ။ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ် ဘယ်အထိလဲ။ မြောက်ရခိုင်က ခွဲထွက်၊ တောင်ရခိုင်က ဖက်ဒရယ်လား။ ဝပြည်နယ် သတ်မှတ်မယ်။ မြောက်ဝ က ပြဿနာမရှိ။ ရှေးထဲက ဝပြည်နယ် ပေးလို့ရတယ်။ တောင်ဝက ရှမ်းဆီက လုထားတာ။ ဘယ်လို နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မလဲ။ ဒါတွေဟာ မြို့နယ် တခုချင်းစီက လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကနေ ဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ မတည်မငြိမ် အကြောက်တရား ကြီးစိုးတဲ့ ကာလမှာ လွတ်လပ်တဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိပြည်နယ်ကို မိမိအရင် သိမ်းထား။ ယာယီ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ် အဖြစ်ထားပြီး နောင်အခါမှ မြို့နယ် ဆန္ဒခံယူပွဲ တွေနဲ့ ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ထည့်ရေးရမယ်
အကြံပေးချင်တာက ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်ရော၊ ပြည်နယ်အရေအတွက်ရော ကိန်းရှင်ထားဖို့ လိုတယ်။ ၁၀ နှစ် တကြိမ် မြို့နယ်ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ပြီး ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ် flexible ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့် ဖက်ဒရယ်အလံမှာ ကြယ်တွေ မထည့်ပဲ ၊ နိုင်ငံမြေပုံတောင် မထည့်ပဲ ထားဖို့လိုတယ်)
ဒါကြောင့် ပင်လုံစာချုပ်လိုပဲ တရားဝင်မှု အားကောင်းတဲ့ ဖဒရယ် ကတိကဝတ်ကြေညာစာမ်းကို အမာခံ ပင်မ ကျောရိုး Hard Core ထားပြီး ၊ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေက ထပ်ဆင့် တည်ဆောက်တဲ့ နည်းဗျူဟာ ကို CRPH က ရွေးချယ်တာ ဖြစ်တယ်။
2021-04-15 at 11:07 AM
Heart touching voice 🥺
May Sabel Oo says:
2021-04-15 at 11:20 AM
အဲ့ကြောင့်မို့ CNN က ကမ္ဘာကိုပြောပြတာကိုး ..
‘ဈေးသည်ညီမငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ English skill လောက်တောင်မရှိတဲ့ လူယုတ်မာတွေက တိုင်းပြည်ကို ယခုလို အုပ်ချုပ်နေတာတဲ့…
2021-04-15 at 11:24 AM
Very essential to have one unified active media for everyone to be connected to for one cause , to eradicate military dictatorship.
Ko Ko Naing Naing says:
Thank you for your efforts CRPH.
Edward Kokoaung says:
Public Voice TV is the Myanmar Federal Government, media outletmedia campaign or movement
2021-04-15 at 12:36 PM
Our voice hasastrong strength the power of unity is can get what we want. We will fight till what we deserve. this is our fight we will fight till we achieve our democracy and freedom of humanity .we will win we must win if we are together, united.
2021-04-15 at 1:03 PM
We’re waiting Public Voice Television
Hnin Mya Aye says:
we’re waiting and welcome to CRPH.
Zun Pan Wai Tun says:
2021-04-15 at 1:24 PM
Just only we have voice 💪🏻💪🏻💪🏻
2021-04-15 at 2:21 PM
ဘာ သေနပ် မှ..မရှိဘူး…
လေးတခု ထည်း…ဘဲရှိတယ် …
စစ်အာဏာသိမ်း မှု့ ကို…
လုံးဝ…လုံးဝ…မလို လားပါ ဘူး….ဆိုတဲ့…..
Gz. ..လေးတယောက် ရဲ့
တိုင်းပြည် အပေါ် ကယ်တင် လိုတဲ့….အသံ…..
Aye Yu Hlaing Chan Htoo follow လုပ်ပေးပါ
2021-04-15 at 3:29 PM
မုံရွာက နေ့တိုင်း ခေါင်းဆောင်ပီး ထွက်တဲ့ သပိတ်ခေါင်းဆောင် ကိုဝေမိုးနိုင် အဖမ်းခံရပါတယ်။
ဆယ်လီတွေ တို့၊ ဆရာဝန်ကြီးတွေ တို့က အဖမ်းခံရရင်တောင် နှိပ်စက်ခံရဘို့ အခွင့်အလမ်း နဲနဲ နဲဦးမယ်။
ကိုဝေမိုးနိုင် လို လူမျိူးကိုတော့ နှိပ်စက်ပီး အစဖျောက်ပစ်မှာ ၊ အလောင်းလာပို့မှာတွေ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ အကာအကွယ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
Amnesty International, AAPP တို့ ၊ ICRC တို့ ၊ UN/Embassy တို့ ဖြစ်နိူင်ရင် statement ထုတ်ပေးကြပါ။ ရှေ့နေငှားပေး၊ တွေ့ခွင့်တောင်းပီး ဥပဒေအရ ခုခံကာကွယ်ခွင့် ရှိအောင် တောငိးဆိုပေးကြပါ။
Credit – MMMZ
Nnge Mya Shin says:
Paing Thet Kyaw says:
That’s our voice that the most strongest than their weapons and guns.We must win that I believe CRPH👏👏👏
2021-04-15 at 8:25 PM
Just only we have voice ✊✊✊✊❤️❤️❤️❤️
ငါတို႔ နိုင္ မွာ
2021-04-16 at 2:58 PM
AK AungKhin says:
2021-04-16 at 3:56 PM
2021-04-16 at 5:29 PM
2021-04-16 at 6:44 PM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) အား ပြည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင် အပြည့်အဝထောက်ခံကြိုဆိုပါ၏
Thin Su says:
2021-04-16 at 7:00 PM
2021-04-16 at 8:07 PM
Yuyuwah Yuyuwah says:
2021-04-16 at 8:29 PM
Inguli Mala says:
2021-04-16 at 8:33 PM
Congratulations. CRPH R PVT
2021-04-17 at 7:21 AM
Pay Satthu Gyi says:
2021-04-17 at 9:59 AM
PSI ကလွှင့်ပေး ကြပါ
We don’t have weapons.
We don’t have guns.
Just only we have voices🌹❤️